Video: Life & Dance 10th Years Anniversary Dancing Concert | Myanmar Celebrity Gossip & News
Video: Life & Dance 10th Years Anniversary Dancing Concert
Here is the Video of "Life & Dance 10th Years Anniversary Dancing Concert" which was held on 15 January 2012 at Myaw Sin Gyun, Kan Daw Gyi Park, Yangon.
ဇန်န၀ါရီလ (၁၅) ရက်နေ့က ကန်တော်ကြီး၊ မျှော်စင်ကျွန်းမှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ Life & Dance (၁၀) နှစ်ပြည့် အကဖျော်ဖြေပွဲ ဗီဒီယို Video of Life & Dance 10th Years Anniversary Dancing Concert on Youtube!!! Video of MyanmarCelebrity.Com
zinniaJanuary 20, 2012 at 9:45 AMho main ma2yout ka tot takal sate pyat sayar.. ade words ko ade mouth ka htwet ye` tal ha.... :OReplyDeletesumayntmonJanuary 20, 2012 at 11:56 AMomg i love it <3 there are so good ^^ i like this dance.ReplyDeletebanana julyJanuary 20, 2012 at 12:59 PMအမလေး..............ဟိုမရောက် ဒီမရောက်လူတွေ ပါလား... နိုင်ငံခြားစတိုင်ကို အတုခိုးရင်လည်း ပီအောင်လုပ်စမ်းပါ... ရုပ်တွေကိုက လုပ်စားတဲ့လူတွေကျနေတာပဲ................ReplyDeleteKaung KaungJanuary 20, 2012 at 3:02 PMWhat? What? YAK..Youth's Asshole Knave...I wanna fuck both of them together with my big cock...ReplyDeleteCrazyCATJanuary 20, 2012 at 4:21 PMat 7:19... they copied http://www.youtube.com/watch?v=emy9R7zxAlgReplyDeleteWinJanuary 20, 2012 at 5:21 PMသူများနိုင်ငံက အကတွေကိုအတုခိုးရင်လည်း သူတို့လိုကတတ်အောင် ကြည့်လို့ကောင်းအောင် သေချာခိုးကကြပါလား..အခုဟာက ဟိုမရောက်ဒီမရောက် ..တစ်ခါလာရင်လည်းဒီအကကွက် နောက်တစ်ခါလာရင်လည်းဒီပုံစံဘဲ့..သူများနိုင်ငံကကြည့်ရင် ဟာသဖြစ်နေမယ်..နောက်တစ်ခါ internet မှာမတင်နဲ. နင်တို့ကိုယ်တိုင်ဘဲ့ကြည့်ကြ...နင်တို့စောက်ခွက်မရှက်ပေမဲ့ ငါတို့ရှက်တယ်..ReplyDeleteReplieschitpyaeJanuary 21, 2012 at 6:47 AMthat's right!!!DeleteReplyUnknownJanuary 20, 2012 at 8:01 PMအဲဒါ ငါတို့ရွာလေReplyDeletekhinpapasweJanuary 20, 2012 at 10:10 PMta yoke ta pout nat bal lo twey ka nay dar le ma ti dod bar bu,myanmar dance nat,နိုင်ငံခြားdance shin bi ka dar dod ta baw kya dal,ma too yin ma tut dar kg mal lot htin dar bal nawReplyDeletekhinpapasweJanuary 20, 2012 at 10:14 PMta yoke ta pout nat bal lo twey ka nay dar le ma ti dod bar bu,myanmar dance nat,နိုင်ငံခြားdance shin bi ka dar dod ta baw kya dal,ma too yin ma tut dar kg mal lot htin dar bal nawReplyDeletekyawtheinmyintJanuary 21, 2012 at 6:41 AMdance idea လေးတွေပိုကောင်းလာတယ် ညီညီညာညာဖြစ်အောင် ဆက်ကြိုးစားကြပါ။ ဘာလုပ်မှာလဲဆိုတဲ့ နှစ်ယောက် စကားလုံးတွေက ကြမ်းတမ်းလွန်းတယ် ပြီတော့ သူများမကောင်းကြောင်းရေးပြီးဆိုမှ အနုပညာမြောက်မယ်ဆို အဲဒီလိုဖန်တီးမှုမျိုးကိုတော့ အားမပေးပါ။ReplyDeletechitpyaeJanuary 21, 2012 at 6:46 AMရိုင်းတာတော့ရိုင်းတယ်..။ ဒါပေမယ့်လည်း မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဖြစ်နေတဲ့အဖြစ်မှန်တွေကိုဆိုသွားတာလေ...။ReplyDeleteလူကြမ်းJanuary 21, 2012 at 1:28 PMဟ အပေါ်က ကောင် အမှန်တရားတွေ သာ လျှောက်ရေးပြီး သီချင်းဆိုနေရရင် .. ဘာအလုပ်မှ တောင် လုပ်စားမနေနဲ့တော့ ဟကောင်ရ..မှန်တာက မှန်တာပဲ... မင်းအဖေနဲ့ မင်းအမေက မင်းကို လိုးပြီး မွေးလာတာလေ..မှန်တာပဲ..ဘယ်သူငြင်းမလဲ..ဒါပေမဲ့ လိုးပြီးမွေးတာ မှန်တယ်ဆိုပြီး လမ်းလယ်ခေါင်းမှာ မင်းအမေနဲ့ မင်းအဖေ ထွက်လိုးဖူးလို့လား...မင်းကို အလို ပြောရင် မင်းဘယ်လောက် နာမလဲ ကိုယ်ချင်းစားကြည့်လေ...ဒါ လူတိုင်း ဖြစ်နေတဲ့ အမှန်တရားကို မင်းစီမှာ ငါ တံဆိပ်ကပ်ကြည့်တာနော်..မင်းလက်ခံနိုင်မလား အရင်စဉ်းစား...ဒီမိန်းမတွေက နောက်ဆုံးမှာ ( သူတို့ဆိုတာ ရိုင်းချင်ရိုင်းနေမယ် ။ ဒါ ပေမဲ့ ဒါတွေက အမှန် တရားပါဆိုပြီး ပြောသွားတယ် ×××× ) ဒီလို အပေါစား စည်းရုံးရေးနည်းနဲ့ လူတွေက ဒီမိုကရေစီ ဘာဖြစ်တယ် ညာဖြစ်တယ် ။ အမှန်တရားပြောတိုင်းလက်ခံမယ် သူတို့ကို သဘောကျမယ်ထင်နေတာ ။ ဒီ သီချင်းက Underground မှာ ထွက်နေတာ ကြာလှပြီ... ခုမှ သူတို့ စင်ပေါ် တက်ဆိုလိုက်လို့ သိသွားကြတာ...တချို့အရာတွေက ကိုယ်နဲ့ နှိုင်းပြီး ခံစားကြည့်မှ...အရှက်နဲ့ သိကာ တရားကို နားလည်တတ်မှကွ...ငစနူလေးရ..အမျိုးသားရေးနဲ့ လူ့အခွင့် အရေး ...အမှန်တရားနဲ့ ကိုယ်ချင်းစာတရာ....ရောထွေးပြီး မသဲကွဲတဲ့ ဒီ အရေးတွေမှာ ရေလိုက်မမှားနဲ့ကွာ..စာများများဖတ်အုန်း ဟရောင် ChitpyaeReplyDeletethetzawJanuary 21, 2012 at 3:46 PMlove YAK. i like..... tryReplyDeleteNay Yar LayJanuary 21, 2012 at 8:14 PMlife & dance ဈေးခေါ်လေလံပွဲကြီး ဆိုရင်ပိုမှန်မယ်ReplyDeleteIZJanuary 22, 2012 at 12:59 AMခင်ဗျားတို့ပြောတာ မတရား ရာ ကျတယ်ဗျ...ဒါခေတ်ဗျ...ခေတ်..လူတိုင်းဟာ ကိုယ့်ယုံကြည်ရာ အနုပညာကိုတင်ဆက်ခွင့်ရှိတယ်..ဒီမှာရေးနေတဲ့သူတွေအကုန် အနောက်တိုင်း အမ်တီဗီတွေ ကြည့်ကြတယ်...ကိုယ့်ကိုကိုယ် ပြန်ဆန်းစစ်ဗျာ...ခင်ဗျားတို့ ဘယ်လောက် မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုကို ထိန်းသိမ်းခဲ့လဲလို့..အရာရာတိုင်းမျာ .ဘက်မျှစွာ တွေးတက်ဖို့လိုတယ်...ခင်ဗျားတို့ မဲကိုက်ရင် မကြည့်လို့ရတယ်..ဒါပေမဲ့ သူများသားသမီးကို ဆဲစရာမလိုဘူး...အဲသလို ဆဲတာရော မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုလား..မိဘက ဆိုဆုံးမထားလို့ သူများသားသမီးကို ၀င်ဆဲတာလား...ကိုယ့်ကိုကိုယ်စဉ်းစားReplyDeleteMaung PhoJanuary 22, 2012 at 4:29 AMWhat the hell is going on? Government should punished these two ladiesReplyDeletekyaw kyawJanuary 22, 2012 at 6:56 AMdance idea လေးတွေပိုကောင်းလာတယ် ညီညီညာညာဖြစ်အောင် ဆက်ကြိုးစားကြပါ။ ဘာလုပ်မှာလဲဆိုတဲ့ နှစ်ယောက် စကားလုံးတွေက ကြမ်းတမ်းလွန်းတယ် ။ အမှန်တွေဆိုပေမယ့် ကြမ်းလွန်းတော့ရိုင်းသလိုဖြစ်နေတယ် ။ ယဉ်ယဉ်လေးနဲ့ ထိမိမဲ့စကားလုံးတွေသုံးနိုင်မယ်ဆိုရင် ပိုသင့်တော်မယ်လို့ထင်ပါတယ် ။ReplyDeleterapperJanuary 22, 2012 at 8:27 AMယဉ်ကျေးမှုပျက်ပြားလွန်းစေတဲ့အက များကို myanmarcelebrity မှာပြသနေတာဟာ လူမိုက်အားပေးနေတာဖြစ်နေပီလား...ရည်ရွယ်ချက်က ဘာများလဲ ....မသိနိုင်တော့ ...command အသံများလဲ respect လုပ်ကြပါအုံး...လူငယ်တွေဟာတိုင်းပြည်ရဲ့နိမ့်ကျနေတဲ့ ပညာရေးနဲ့ အလုပ်လက်မဲ့တွေပေါများနေချိန်မှာ..လူအများစုမိသားစုစီးပွားရေးကျဆင်းနေချိန် ....အရှည်ကိုစဉ်းစားသင့်တယ်...ဘာတွေဖြစ်လာမလဲ...လွတ်လပ်မှုနဲ့စည်းကမ်းခွဲခြားသိသကြရအောင်...လူငယ်များအတွက်ရင်လေးလွန်းလို့ရေးလိုက်တာပါ..မည့်သူ့ကိုမျှနစ်နာစေလိုခြင်းမရှိပါ...ကျေးဇူးတင်ပါရစေ....ReplyDeleteko aungJanuary 22, 2012 at 9:40 AMအပြင်မှာ တကယ် ဖြစ်နေတာတွေကို အားလုံးလဲသိနေကြတာပဲ....ဘာသာရေး အမြင်နဲ့ ပဲကြည့်ကြည့် လူမူ့ ရေး အနေနဲ့ ရော သီချင်းလုပ်ဆိုစရာအကြောင်းမရှိပါ.....ဆိုခွင့်ပြုတဲ့သူတွေမှာ လုံးဝ တာဝန်ရှိတယ်........နံမည်ကြီးချင်တယ်ဆိုရင်လဲ စကားလုံးလှလှ လေးတွေနဲ့သူများတွေလိုကြိူးစားစေချင်ပါတယ်......ReplyDeleteDarkJanuary 23, 2012 at 11:47 AMi love break dance Vs Myanmar Minthar dance butthe other dances embarrass me (especially when i know who origially performed those dances) especially the instructor who teach the group dances are shameless cuz that person can not create own dance moves almost all the moves are copied fromQuest crew, Super Crew, So Real Crew and Jabbawockeez all of them performed on "american best dance crews" series and all the moves were performs like3or4years ago (check youtube)some performances were copied from korean MTVsthey also copied from "so you think you can dance" showshttp://www.youtube.com/watch?v=9NdPGzIkqTM <--- indian dance originally performed by katie and joshuahttp://www.youtube.com/watch?v=emy9R7zxAlg <------- bleeding love performed by mark and Chelsieit's really embarrassing asamyanmar that they copied moves from other people without creating own moves and it is even worse when they can't even do good job and copying. really terrible performances. i am so glad i never go to those trashy shows.ReplyDeletezawJanuary 23, 2012 at 7:09 PMဟုတ်ပါတ၇် ..ko aungပြောတာ။ အပြင်မှာလက်တွေ့ဖြစ်နေကျတာဆို၇င်ေ၇ာ ..အမိတို့တွေဆိုလိုက်လို့ အားလုံးသိပြီး အဲဒါမျိုးလျော့နဲသွားမယ်လို့ ထင်သလား?သေချာတာကတော့ အမိတို့ကိုဘေးကလူတွေက တန်ဖိုး levelတစ်ခု သတ်မှတ်ပေးလိုက်မှာတော့ အသေအချာပဲ။ (ကျွန်တော်အပါအ၀င်ပေါ့)။ ဒါက စီစဉ်တဲ့သူတွေမှာလည်း လုံးဝတာဝန်၇ှိပါတ၇်။ ဒါကိုယ့်အိမ်မှာ ကြည့်တဲ့၇ုပ်၇ှင်ကားမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ လွပ်လပ်မူတိုးတက်မူဆို၇င်လည်း ဘောင်တစ်ခုအတွင်းမှပဲ ၇ှိ၇မှာပါ။ ဗ၇မ်းဗတာ စည်းလွတ်ဝါးလွတ်မဖြစ်သင့်ပါဘူး။ReplyDeletezawJanuary 23, 2012 at 7:51 PMဟုတ်ပါတ၇် ..ko aungပြောတာ။ အပြင်မှာလက်တွေ့ဖြစ်နေကျတာဆို၇င်ေ၇ာ ..အမိတို့တွေဆိုလိုက်လို့ အားလုံးသိပြီး အဲဒါမျိုးလျော့နဲသွားမယ်လို့ ထင်သလား?သေချာတာကတော့ အမိတို့ကိုဘေးကလူတွေက တန်ဖိုး levelတစ်ခု သတ်မှတ်ပေးလိုက်မှာတော့ အသေအချာပဲ။ (ကျွန်တော်အပါအ၀င်ပေါ့)။ဒါက စီစဉ်တဲ့သူတွေမှာလည်း လုံးဝတာဝန်၇ှိပါတ၇်။ ဒါကိုယ့်အိမ်မှာ ကြည့်တဲ့၇ုပ်၇ှင်ကားမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ လွပ်လပ်မူတိုးတက်မူဆို၇င်လည်း ဘောင်တစ်ခုအတွင်းမှပဲ ၇ှိ၇မှာပါ။ ဗ၇မ်းဗတာ စည်းလွတ်ဝါးလွတ်မဖြစ်သင့်ပါဘူး။ReplyDeleteCow Boy From HellJanuary 24, 2012 at 7:03 AMအဆိုးမြင်ပြီး မကောင်းပြောထားတဲ့ သူတွေ အားလုံး .. စိတ်ဓါတ်လုံးဝမကောင်းဘူး ..။ခုဒီဝဘ်ဆိုဒ်ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အဲလိုပုံတွေတင်ပေးလို့ ..တကယ်ဆိုသူ့ ဘဝနဲ့ သူ့ အကြောင်း ဘာ မှ ဘေးထိုင်ဘုပြောစရာ အကြောင်းလုံးဝမရှိ ..............။လူကြမ်းဆိုတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ် က သူများကိုစာများများဖတ်ဖို့ ပြောသွားတယ် ..။စာဖတ် လို့ သာပြည့် ဝပြီး ဘောင်ဘင်မခတ်ဘူးဆိုရင်သူကိုယ်တိုင်သူများကိုဘောင်မဝင်တဲ့ အကြောင်းတွေ သွားပြော စရာ မလို ဘူး ..။သူပြော တာ တွေ ကတကယ် တော့ ဘာ မှမဆိုင်ဘူး။သုံးတွေစကားလုံးတွေ က သီချင်းဆိုတဲ့ ကောင်မလေးတွေထက်ပိုရိုင်းတယ်။ယဉ်ကျေးမှုဆိုတာ ကို ဘယ်လိုပေတံနဲ့ တိုင်းလဲပြောပြ ပါ ...။ဘယ်သူကရော မြန်မာ့ ယဉ်ကျေးမှုကို သေလောက်အောင်ချစ်မြတ်နိုးလဲ။ ခများတို့ တွေ အားလုံး ခုယဉ်ကျေးမှုနဲ့ ပတ်သတ်ပြီးအရမ်း ..အထိမခံနိုင်အောင်ဖြစ်နေကျတယ် ..။ဒါပေမဲ့IZ ပြော သလိုပဲ နိုင်ငံခြားအမ်တီဗီလဲကြည့် တာပဲ၊ မြန်မာ့ အသံက သီချင်းကြီး အစီအစဉ် ကို ဘယ်သူမှတကူးတက စောင့် နားမထောင် ကြဘူး ...။ဝတ်တော့ လဲ နိုင်ငံခြားဖတ်ရှင်ဘယ်သူမှ ရင်ဖုံးနဲ့ တောင်ရှည်ပုဆိုးမဝတ်၊ထိုင် တော့ လဲ နိုင်ငံခြားပုံစံ Cafeteria ....။ပြီးတော့ ဝန်ခံကြည့်ပါခများတို့ ကိုယ်တိုင်စိတ်ထဲမှာညစ်ညမ်းမှုတွေရှိနေတယ်။ဆိုက်ကိုသဘောအရခုရှိုးပွဲကို တုံ့ ပြန်တဲ့ ခများတို့ ကွန်မန့် တွေကြည့် လိုက်ရင် ပိုသေချာတယ်။လူဆိုတာ အမှောင်ဘက်တခြမ်းဆီရှိနေတဲ့ လ တွေ ပဲလို့ စာထဲမှာ တွေ့ ဖူးတယ်။ ခများတို့ ရဲ့ အမှောင်ဘက်အခြမ်း က ပိုညစ်ညမ်းပီးအောက်တန်းကျမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ မြန်မာဝတ်ဆိုဒ်တွေမှာ ကွန်မန့် ပေးတာ နဲ့ ပတ်သတ်လို့ အရမ်းစိတ်ပျက် ဖို့ ကောင်းတဲ့ ၂ ချက်ရှိတယ်(၁)ဗိုလ်ချူပ်ပြောတဲ့ နိုင်ငံကြီးဖြစ်တော့ မယ် ဆိုပီး ကိုယ့် ပါးစပ်မဆန့် တဲ့ စကားကိုအမြဲပြောကြတယ်(၂)လူတချို့ က ကိုယ့် ကိုကိုယ် လောကပါလ တရားတွေ နားလည်နေသလိုပုံမျိုး၊ရှင်မဟာရဌသာရ ဆုံမစာကိုအာဂုံဆောင် ထားသလိုမျိုးဟန်ဆောင်ကျတယ်။ဗိုလ်ချူပ်က တွေးတက်တယ်၊ Flexible လဲ ဖြစ် တဲ့ သူ ဆို တော့ ခုလိုဖြစ်နေတဲ့ အခြေအနေတွေ ကိုသူနားလည်မှာပဲ။ မြန်မာ့ ယဉ်ကျေးမှုအကြောင်းပြောပီး .. သူများတွေကိုဖရုဿဝါစာတွေပြော နေတာ ဂွ ကျတယ် ဗျာ ..။Myanmarcelebrity.com ကို ဒီပုံတွေများများတင်ပေးဖို့ ပြောချင်ပါတယ်။ ဒီပုံတွေကြောင့် ဘယ်မြို့ က ကောင်မလေးတွေဘယ်လိုပျက်စီးကုန်ကျပီဆိုပီး ဘယ် ဂျာနယ်မှာ မှ မတွေ့ ဖူးဘူး..။ ဘာလို့ လဲဆိုတော့ ဒါဟာ ယူ တဲ့ သူဆိုင်လို့ ပဲ။ဘာကြီးပဲလုပ်ပြလုပ်ပြ ကိုယ်မယူရင်မရဘူး...ကိုယ်မမကောင်းတာယူရင်မကောင်းတာပဲရမှာပဲ .. ။ဒီတိုင်းနေရင်းနဲ့ ဒီပုံတွေကြောင့် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတစ်ယောက်ဘဝပျက်တယ်ဆိုရင် ဒါသူရဲ့ ဗီဇ အခံ မကောင်းလို့ ပဲ၊မဖွံဖြိုးလို့ ပဲ။ဒါဆိုသူကိုယ်တိုင်၊သူ့ မိဘ၊သူ့ ဝန်းကျင်နဲ့ ပဲဆိုင်တယ်။မကောင်းတာရဲ့ လွှမ်းမိုးတာခံရတယ်ဆိုကတဲ က သူကိုယ်ကျင့် တရားအားနည်းလို့ ။..ReplyDeleteram nawJanuary 26, 2012 at 1:36 AMyes..i agree to cow boy from hell.....coz we should know world is not stop also any people are running on the world...between that we should have understanding power...we want human right...we should have understanding power....ReplyDeleteThar DuFebruary 11, 2012 at 11:52 AMအိမ်း.....ခုလို၇ှုစားပြီးသကာလမှာ သိလိုက်၇တာကတော. ...." ပြည်.တန်ဆာ နဲ. မျောက် စပ်ကြထားတာတွေပါလား .."အိမ်း.....ဟုတ်လေစွ ...ဟုတ်လေစွ...ReplyDeletemoeFebruary 17, 2012 at 4:34 AMDid Myanmar Ministers enjoy the show?ReplyDeletemoeFebruary 17, 2012 at 4:34 AMDid Myanmar Ministers enjoy the show?ReplyDeletemoeFebruary 17, 2012 at 4:37 AMWas Minister BG Kyaw San happy and enjoying the show?ReplyDeletemoeFebruary 17, 2012 at 4:39 AMDid Minister BG Kyaw San bother to keep Myanmar Culture and history in good shape? Or is he compromising?ReplyDeleteShowFebruary 25, 2012 at 12:27 PMဆဲတာတွေကလဲအရမ်းမိုက်ရိုင်းတယ်ဗျာသူများကိုမပြောနဲ့ ပြောတဲ့ကောင်တွေကရောဘယ်လောက်ယဉ်ကျေးနေလို့လဲသူများဘာလုပ်လုပ်အကောင်းမမြင်တဲ့ကောင်တွေကိုယ် ကိုယ်တိုင်ကျတော့လည်းအဖြစ်မရှိပဲနဲ့သူတို့ဘာသာဘယ်လိုကကပေါ့ မကြည့်ချင်မကြည့်နဲ့လေအက ကတာပဲဗျာ ထမီနဲ့ ရင်ဖုန်းနဲ့ ကရမှာလားငါနဲ့တော့ဘာမှမဆိုင်ဘူးဆဲတာတွေ မိုက်ရိုင်းလွန်းလို့ပြောရတာReplyDeleteminkhant.bmw@gmail.comApril 14, 2012 at 8:32 AMall areayoo.ReplyDeleteArkritiMay 1, 2012 at 4:01 PMsec part of the 6:21 are copy from http://www.youtube.com/watch?v=LgkwI36bkJI but anyway they copied gud not badReplyDeleteAdd commentLoad more...